Oromada oo wada Qorshe ay ku Tirtirayso mamulka Herarida kulana wareegayso Harar. | ogaden24
Oromada oo wada Qorshe ay ku Tirtirayso mamulka Herarida kulana wareegayso Harar.
Magaalada Harar ee xarunta mamulka Hererida waxaa kataagan xiisad siyaasadeed oo ay mamulka Oromadu kudoonayaan inay Gabi ahaan magalada kagala wareegaan Qomiyada Hererida iyo mamulkooda.
Ololaha Qorshaysan ee Oromadu kudoonayso inay kula wareegto magalada Harar iyo mamulkeeda oo mudo dheer soo Jiitamayay, ayay iskudaya badan oo Horay ay u sameeyeen waxaa fashiliyay Hogaankii Kooxda TPLF waxaana haatan muuqata in Oromadu ka Faa’iidaysanayaan Fursad ay u arkaan inay Tahay Dahabi.
Oromada ayaa Aaminsan inay iyagu leeyihiin magalada Harar oo ay Hareeraheeda wax kadagan yihiin waxayna Tan iyo intii ay bilaabeen Kacdoonkii Guulaystay, ayay wadeen Qorshe isku xidhan oo ay kudoonayeen inay magaalada kula wareegaan ayna mamulka Oromadu dabada kariixayeen.
Arinta Oromada u sahlaysa Lawareegida magalada ayaa ah in ciidamada Police-ka iyo kuwa Liyuuga ee mamulka Hererida ba ay yihiin Oromo, maadaama Qomiyada Hereridu ay yihiin dad aad u tira yar aysana Qayb ka ahayn arimaha ciidamada ayay iskudayayaan Oromadu inay ka faa’iidaystaan Fursadaha ay Haystaan.
Mudaharaad Qorshaysan oo shalay ay sameeyeen ciidamada Police-ka iyo kuwa Liyuuga ayay kula wareegeen inta badan xarumihii mamulka, waxayna magalada dhex marayeen iyaga oo wata calamada Jabhada OLF iyo kan mamulka Oromada, taasi oo muujinaysa in Qorshaha Oromadu yahay sidii ay Gabi ahaan ula wareegi lahaayeen magalada Harar iyo mamulkeeda.
Xiisada soo Jiitamaysay ee Oromadu kudoonayso inay kula wareegto magaalada iyo mamulkii Hererida ayaanay dawlada dhexe kahadlin, waxaana muuqata in damaca dhul balaadhsiga kudhisan ee Oromada aysan jirin cid kabad baadaysa Hadaan Layska dhicin.